अब मलाई त्यही हड्ताल र चक्काजाम प्यारो लागेर आयो | मझेरी डट कम
अब मलाई त्यही हड्ताल र चक्काजाम प्यारो लागेर आयो
HomSuvedi — Tue, 10/03/2017 - 14:27
उहाँ पुग्नेबित्तिकैको मलाई पहिलोपटक छोरीले दिएको दीक्षा थियो—“मुखमा थुक आयो भन्दैमा यहाँ जतापायो उतै र जहाँसुकै थुक्नुहुन्न, विचार पु¥याएर थुक्नुपर्छ । ठुलो आवाजले खोक्नुहुन्न । अलिक नियन्त्रण गरेर खोक्नुपर्छ, । यहाँ चिया पानी वा अन्य कुराहरु खाँदा वा प्युँदा स¥यार र स्याप्¥याक्क पार्नुहुन्न । त्यस्तो मान्छे बडो असभ्य मानिन्छ । ममले यस्ता कुराहरुमा विचार पु¥याउनुहोला ।”
यो मेरी छोरीले दिएको दीक्षा थियो । छोरीले दिएको यो दीक्षा पालन गर्न सक्छु कि सक्तिनँ भन्ने लागेर मलाई अलिकति झस्का प¥यो । तैपनि आइएको छ विदेश, यस मुलुकमा उनीहरुको नियमभित्र ता बस्नै पर्छ नि भन्ने लागेर म आफैंमा आश्वस्त बनें, मैले आफैंलाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरें ।
म अलिक रोगी छु । रुघाखोकी लागिरहन्छ । सधंै जस्तो खोकी र रुघा लागिरहनु मेरो उहिल्यैदेखिको शारीरिक समस्या हो । नाक बग्ने र कफ आउने गर्छ । खोकी लाग्ने रुघा ता हो नि भन्छु हेल्चेक्र्याइँ गर्छु, यस्तो हुँदा तुलसीपत्ता हालेर नुन र बेसारका साथ पानी पकाउँछु । पकाएर सेलाएको त्यो पानी सुत्ने बेलामा घटघट पिउँछु र सुत्ने गर्छु । भोलिपल्ट केही हलुका भएको हुन्छ । डाक्टरी उपचारको झमेलो गरिरहन्न । आफ्ना यिनै जरीबुटीको उपयोगबाट यो यसै जिम्लिन्छ र आफैं कुनै दिन गएर रोग तङ्ग्रिन्छ । मेरो उहिल्यैदेखिको यो रोग हो । अहिले लामो अन्तरिक्ष यात्रा गरेर कुबेरको मुलुकमा आइपुग्दैदेखि म यही मेरो निजी रोगबाट ग्रसित छु । मेरो यही स्थिति देखेर होला मेरी छोरीले मलाई सतर्क गराएको । कतै छोरीको इज्जत नजाओस् भनेर म पनि बडो चिन्तित छु ।
हप्ता दिनसम्म कोठामा कोचिएर बसियो । कति कोठामा कोचिएर बस्नु भन्ने पनि लाग्न थालेको थियो । यहाँ ता तुलसी पत्ता कहाँ पाइनु, बेसारसम्म पाइँदो रहेछ । बेसार पानी खाएँ, अलिकति रुघासम्म ता कम भयो, तर खोकी उस्ताको उस्तै छ । विदेशमा रमाइलो र आराम गर्न आएकी अरे, खा बाबै केरा भनेजस्तो पो भइरहेको छ ।
बल्ल बल्ल छोरीले कसरी हो फुर्सुद मिलाएर मलाई एकाबिहानै चौडा चौडा सडक पार गराएर एक बगैंचातिर लिएर घुम्न लिएर हिंडी । ऊ मलाई उसै गरी सतर्क गराइरहेकी थिई । “झुक्किएर कतै थुक्नुहोला नि ! फेरि परिन्छ डन्डमा !” छोरी मलाई अस्तिको भन्दा अझ बढी सतर्क गराइरहेकी थिई । म भने एकातिर ठुलो आवाजमा खोकिने पो हो कि भन्ने कुरालाई लिएर त्राहित्राहि थिएँ भने अर्कातिर खोकी लागेर मुखभरि खकार पनि आइरहेको अवस्थामा थिएँ । धन्न केही प्लास्टिकको झोलाहरु नेपालबाट लुकाएरै भए पनि लिएर आएकी थिएँ र छोरीको इज्जत बचाइरहेकी थिएँ, छोरीलाई डन्ड तिर्नबाट बचाइरहेकी थिएँ । मुखबाट आएको खकार त्यसैमा थुकेर झोलामा हालेर बोकेकी थिएँ र त्यहाँ म बडो भद्र र सभ्य भइरहेकी थिएँ । यस्तो अवस्थामा दिशापिसाब आए के गरिंन्थ्यो होला, वा झोलैमा पो हाल्नु पर्ने हो कि ? सोच्तै पनि थिएँ । मैले खकार थन्क्याएको कुरा कुनै मान्छेले देख्ने पो हो कि भन्ने त्रासका साथ अभिन्तरमा र नदेख्ने जसो गरी पोको पार्दै झोलामा लुकाउँदै बोकिरहेकी थिएँ । आएको खोकीलाई आफैं घिच्र्रो च्यापेर नियन्त्रण गर्दथें । खोकी आएपछि अन्तमा सरी भन्नुपर्छ भनेकोले म बेलाबेला सरी सरी पनि भन्दै थिएँ । मलाई लागिरहेको थियो म कुनै ठुलो अपराध गरिरहेकी छु । अहिले यी कुराहरु लेख्न पनि मलाई बडो लाज र घिन लागिरहेको छ । कस्ती फोहोरी आइमाई रहिछे भनेर पाठकहरुले पनि सोच्लान् भन्ने कुरा अहिले यो लेख्ता मनभित्र आइरहेको छ । तर त्यो बेला मलाई बडो विडम्बनापूर्ण स्थितिको बोध भइरहेको थियो, अप्ठेरोको पनि हदै भइरहेको थियो । खकार भित्रै पो निलिदिऊँ कि ! सोच्तै पनि थिएँ । सकिनसकी मुखभरिको आफ्नो खकार आफैं बोकेर हिंड्दै सभ्य बन्नु पर्ने यो मुलुकमा सभ्य बनिरहेकी थिएँ । धेरै खोक्ता आँसु आइरहेको थियो, आँसु झर्दा पनि डन्ड पो तिर्नु हो कि ? सोच्तै थिएँ । यहाँको यसरी बाँच्नु भनेको प्राकृतिक बनिसकेको रहेछ । यो प्राकृतिक बनिसकेको कृत्रिम सभ्यतालाई देखेर मलाई अलिकति पनि चित्त बुझेको थिएन । अव्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्न खोजेको होइन मैले पनि । मलाई पनि अव्यवस्थितताको र फोहोरको पक्षमा केही भन्नु छैन, जथाभावी थुक्तै र भित्तो रँगाउँदै हिंड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन । यस्ता गलत कुराको पक्षमा ओकालत गर्नु छैन । अनुशासित हुनै पर्छ, व्यवस्थित हुनै पर्छ, आजको युगमा सभ्य हुनै पर्छ । यो कुरा जानेर पनि हामी कति पछि छौं सबैलाई कण्ठ छ । सरकारी अफिसहरु वा विद्यालयका छेउछाउ हेर्दा हाम्रो सभ्यता थाहा हुन्छ हामी कति सभ्य रहेछौं भन्ने कुरा । काठमाडौंको गल्लीमा र लगभग नयाँ सडक वा दरबारस्क्वायरको बीचमा समेत मलाई जता पायो उतै थुकेर हिंड्ने अवसर थियो, म जत्रो आवाजमा पनि खोक्न सक्थें । म त्यहीमा बानी परेकी थिएँ, त्यसैमा अभ्यस्त थिएँ । अझ बरा लोग्नेमान्छेहरुले ता यसो अलिक अभिन्तर भेटे भने नयाँ सडकैमा पनि लघुशंका गरिदिन बाँकी राखेका हुँदैनन् । कुनै उपाय नपाएपछि के गरुन् बरा ! यस कुरामा ता हामी आइमाईहरुलाई पो पर्छ त समस्या ! यहाँ कसरी चल्दा हुन् काठमाडौंमा त्यस्तो बानी परेकाहरु ? सोच्तै पनि थिएँ । एकातिर नेपालको त्यो फोहोरोदेखि मलाई घृणा थियो भने यताको व्यवस्थितता र अनुशासनको नाममा खकार र राल पनि बोकेर हिंड्नै पर्ने वा निल्नै पर्ने व्यवस्थितता भने मेरा लागि सुपाच्य लागिरहेको थिएन । यो मुलुकका मानिसहरुले यो शासनलाई कसरी पालन गरेर मर्यादित भइसकेका थिए, उनीहरुलाई यो कसरी पचेको थियो मलाई बडो कठोर यथार्थ लागेको थियो । नत्र भने यो देशमा वाक्वाकी लागेको हँड्याइँदो पानी पनि निलेर स्वस्थ हुनु पो पर्ने हो कि भन्ने अमिलो यथार्थ पनि मनभरि कोक्याइरहेको थियो । खोकी लाग्ने बानी छ, रोगी छु, कतै जाऊँ खोकीले च्याप्छ । त्यो बेला पनि मलाई खोकी लागिरहेको थियो । थुक्ने ठाउँ कतै पाइन्न । के हो यस्तो हरिबिजोग ? मलाई अटेसमटेस भइरहेको थियो ।
पार्कतिर पुगेर बिहानको हावा खान मात्र के पसेकी थिएँ त्यहाँ मेरो भन्दा पनि अरुको बिजोग देखियो । कुकुरहरुलाई चराउन लानेहरुका हातमा कुकुरको गोबर र गहुँत बटुल्ने भाँडाहरु बोकिएका रहेछन् । केही कुकुरहरु ता भाँडामै गोब्व¥याउन गहुँत्याउन अभ्यस्त भइसकेका रहेछन् । त्यसले कुन ठाउँमा खुचालिदेला भनेर तिनीहरुलाई जगजगी परेको बुझिन्थ्यो । जे होस् हातमा कुकुरको गोबर बोकेर कुकुर चराइरहेका केही भद्र भलादमी पनि देखिए ।
केही बेरपछि नै मलाई आप्mनो त्रासबाट मुक्ति मिल्यो । मेरो सोचाइ सब भ्रम मात्र रहेछ । मैले सोचेको कुरा सत्य होइन रहेछ, त्यस्ता फोहोरहरु फाल्ने निश्चित स्थानहरु पनि हुँदा रहेछन् । थुक्ने ठाउँहरु पनि हुँदा रहेछन् । बल्लबल्ल कुरा बुझ्दै थिएँ । बल्ल खकारको एउटा झोला फ्याँके । फ्याँक्नुअघि मलाई छोरीले बडो गम्भीर कुराहरु भनिरहेकी थिई । ऊ मलाई त्यो मुलुकको उन्नति, त्यहाँको प्रगति र त्यस देशले गरेको आर्थिक विकासका बारेमा राम्रै गरी सम्झाउँदै थिई । तर मलाई त त्यो बेला त्यस्ता कुराको कुनै अर्थ थिएन, मुखभरिको थुक र खकार थुक्न पाए कति आनन्द हुँदो हो भन्ने लागिरहेको थियो । त्यस मुलुकले गरेको प्रगतिबाट मलाई त्यस बेला कुनै अर्थ राखेको थिएन, तर छोरीलाई त्यसको महान् अर्थ थियो । ऊ त्यसैमा खुसी थिई, त्यसैमा राजी थिई । त्यसैमा अभ्यस्त भइसकेकी थिई । अनि उसको आग्रह थियो—‘मम, अब यसै मुलुकमा बसौं । सधैं मधेसपहाडको पीडा, सधैं साम्प्रदायिकताको आतङ्क, सधैं चन्दाको आतङ्क, सधैंको हड्ताल, सधैंको बन्द, सधै्रको लोडसेडिङ, सधैं चोरी, सधैं डकैती, यो टन्टाबाट मुक्त हुनुपर्छ मम’ उसको भनाइ थियो ।
यसको मुक्तिका लागि अर्काे मुलुकमा जाने कि आफ्नै मुलुकमा बसेर डने ! म सोच्तै थिएँ । उसले मलाई सतर्क गराएर मेरो मुलुकको अहिलेको यथार्थ देखाए पनि मलाई त उसको मम शब्दतिर पो ध्यान खिचियो । मैले आमाबाट मम हुनु परेकोमा पहिलेदेखि नै भित्र कता कता हो च्वास्स बिझ्न थालेको थियो, कोक्याउन थालेको थियो । अहिले ता मलाई त्यस ममले झन् कोतरेर चिमोटेको अनुभव भयो । यसै छोरीका लागि केही वर्ष पहिलेसम्म म आमा नै थिएँ । यसैका लागि मैले भोक पनि भनिनँ निद्रा पनि भनिनँ । उसको आमा शब्दमा म हार्दिक माया र ममता पाउँथेें तर यो मममा मलाई त्यस्तो केही भएन । यता आएपछि म उसकी मम भएकी छु । यो ममसँग म तदाकारित हुनै सकिरहेकी थिइनँ । किन हो किन, उसको यो बोलीचाली र यो व्यवहारप्रति म भित्रैबाट सन्तुष्ट भइरहेकी थिइनँ । ऊ यता आएपछि उसका लागि म आमाबाट मम भएझैं उसको बाबा पनि ड्याड हुनुभएको छ र उसको भाइ ब्रो हुन पुगेको छ । यी ड्याड र ब्रोहरु के सोच्छन् मलाई थाहा छैन । तर मलाई छोरीले आमाको साटो प्रयोग गरेको ममले चिलिरहेको छ, पोलिरहेको छ, घोचिरहेको छ, कता कता भित्रभित्रै कोतरिरहेको छ ।
यो कहाँको कुरा हो र अहिले म कहाँ छु, कोही हुनुहुन्छ पाठक भने यी कुरा पढेर आफंै बुझ्न सक्नुहुन्छ । आफ्नै बडप्पन देखाउन भएका नभएका कुराहरुको रङ्गीचङ्ग्ी बयान गरेर मेरो मुलुकका जनतालाई आफू स्वर्गैमा पुगेर फर्किएको जस्तो पार्नु परेको छैन मलाई । देशलाई ठगेर घुसको बोरा खाएर विदेश ढल्कन पुगेका फटाहाहरुले के के न देख्यौं भनेर सपनाको संसार देखाएझैं मलाई देखाउनु पनि परेको छैन । कहाँ कहाँ गएर केके देखेंं भन्दै चाहिंदो नचाहिँदो बयान गर्दै दुनियाँको भ्रमण गरेको घमण्डको तुजुक पोख्नु परेको पनि छैन मलाई ।
मलाई यहाँको प्रगतिले चकित तुल्याएको छैन । त्यहाँको वैभवले कुनै फरक पारेको छैन । यहाँ वैभवको स्वाँग पारेर दुनियाँमाथि हैकम गर्ने चलनको मलाई भित्रैदेखि घृणा लागेर आयो । दुनियाँ भरिबाट धनको लोभमा पारेर यस्तै प्राविधिकहरु किन्न सक्नु हो भने हामी पनि कुनै भन्दा कम हुने थिएनौं होला । धनको तुजुकले दुनियाँभरिबाट बौद्धिक तस्करी गरेर ल्याएकाहरु बँधुवा घोडा भएको देखेर पो मलाई ता माया लाग्यो । मनचिन्ते शैलीमा स्वतन्त्रताका साथ एक सास एक गाँस र एक बास यिनीहरुले नपाएको देखेर मलाई ता दया पो लाग्यो । यिनलाई डलरको घारीमा बाँधेर राखिएको रहेछ भन्ने लाग्यो । यिनलाई उठ् भने उठ्नु र बस् भने बस्नु पर्ने बँधुवा बौद्धिकको दर्जा भएको मात्र मैले ठानें । मेरी छोरीको बौद्धिकतालाई यहाँको डलरले किनेको देखेर मलाई त्यही बोध भयो । छोरी पढाउनका लागि गरिएको प्रयत्न र त्यस प्रयत्नका साथ परिश्रम गर्दा उठेका हातका ठेलाहरुका डामहरु मेरा हातमा अझै छन् । उसका लागि मैले गरेको प्रयत्न अझै मलाई मेरा मनभरि ताजै छ । मैले मेरा मुलुकको उन्नतिमा एउटा इटा थप्ने जनशक्ति तयार गर्ने भएँ भन्ने ठानेकी थिएँ, मेरा मुलुकले पनि मेरी छोरीको श्रम किन्न सक्ला कि भन्ने ठानेकी थिएँ । मेरै देशले मेरी छोरीको विद्यावारिधिको महत्व बोध गर्ला भन्ने सोचेकी थिएँ । तर मेरो श्रम र मेरो पसिना डलरले किनिदिएको छ । छोरीले राम्रो डलर कमाइ गरेकी छे । अनि उसलाई त्यही बेलायती गाईलाई झै बाँधिएको छ जसलाई बाँधिएको थलोमा खुलासँग ओर्कनफर्कन पनि मिल्दैन । अहिलेका बेलायती गाईहरुलाई मिठो कुँडो हालिदिएर एउटै थलामा बाँधिदिएर रातदिन दोहेजसरी मेरी छोरीलाई दोहिरहिएको रहेछ । यो तस्करी देखेर मलाई चसक्क बिझिरहेको छ । गरीब घरको गतिलो कुकुरलाई धनी घरका मान्छेले मासुको चोक्टो देखाएर लोभ्याउँदै हातमा पारेर पल्काएझैं मेरी छोरीलाई पनि डलरको लोभमा पल्काइएको छ, हत्याइएको छ । म यस्तै केके सोचिरहेकी छु ।
कमसे कम मलाई यहाँको यान्त्रिक जगत्को दास बनेर आफ्नो स्वत्व गुमाइहाल्ने अहिले विचार आइहालेको छैन । हामी गरीब भएकोमा उहाँ नेपालमा छँदा मलाई दुःख लाग्दथ्यो तर अहिले मलाई त्यही गरिबीको महत्व यहाँको धनाढ्यको भन्दा अधिक लागिरहेको छ । धनाढ्यको धनले बाँधिएका बँधुवाहरुको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई डलरको पाशो लागेको देखें । मेरा ज्वाइँको र मेरी छोरीको घरभित्र पनि भेट भएको मैले देखिनँ । लोग्ने र स्वास्नीको भेटघाट एकै घरमा कतिबेलै पनि हुनै नपाएको देखेर मलाई अटेसमटेर लागेर आयो । कुन दिनमा छोरी दिएकी रहिछुु यो खैरेको मुलुकमा ! मलाई आपैंmं धिक्कार लागेर आयो । अमृतका घडामा व्यक्तित्व गुमाउँदै डुबुल्की मारेर अमृतले नै भोक मार्नु र अमृतमा नुहाउनु भन्दा ता लोग्ने र स्वास्नी एकै छाक मात्रै भए पनि एकसाथ बसेर मिठो मसिनो खाँदै सुख दुःख बाँड्नुलाई नै मैले स्वर्ग ठानें ।
आँखालाई चकित बनाउने पानीका फोहोराको तुमुल दृश्य देखेर मलाई रिँगटा लाग्न खोज्यो । गगनचुम्बी भवनको अट्टालिकामा लिफ्ट चढेर गएका छौं अहिले हामी । सिरानको बार्दलीबाट ओरिपरिको रजधज देखिन्छ । यो सन्ध्याकालीन दृश्यको मनोहर मनमोहक दृश्यले पनि मलाई आकर्षित गर्नुको साटो कोक्यायो । छोरीको लागि म उसले जताजता भन्छे त्यतै त्यतै गएँ । उसले जता जता लान्छे त्यतै त्यतै गएँ । मानौं म कुनै अबोध पशु हुँ जो कुनै मान्छेले अनुशासनको साङ्लोमा बाँधेर डो¥याइरहेको छ । मनमा यस्तो पनि लागिरहेको छ । आकासलाई नै छेड्ने खालका पानीका मुस्ला उठेका छन्, फोहोराहरुमा बिजुलीको रङ्गीचङ्गी प्रकाश प्रयोग गरी आँखाका लागि जादू देखाइएको छ, मसिना पानीका कणहरुको स्पर्शले सुखानुभूति पैदा गरिरहने सुखद स्थिति छ । किन यस्तो अपूर्वताका अघि र यस्तो सुन्दरताका बीचमा पनि मेरो मन खिन्न छ ? मलाई अझै पनि सुखानुभूति र अवलोकनको आनन्द किन आइरहेको छैन ? मलाई मन भरि यस्तै खुल्दुलीहरु आइरहे । त्यसै बेला त्यही उचाइमा रहेको एउटा क्याफेमा छोरीले कफी खान मलाई पनि लगी । अनि डर लागेर आयो कतै कफी पिउँदा स¥याप पो पारिने हो कि ? बरु यो कफीको साटो तुलसी पानी पाइँदो हो त मजाले पिउने थिएँ, बेसार पानी पाइन्न यो ठाउँमा, रुघा ता बिसेक हुने थियो, सोचें मात्र । यहाँ कतै खोकी पो लाग्ने हो कि ? सबैका अघि कसरी प्लास्टिकमा खकार थुक्ने ? थुकेर ब्यागमा हाल्नु हुने हो होइन ? प्रत्येक टेबुलमा बसेका ग्राहको वस्तुस्थितिलाई यथार्थ रुपमा देखाइरहने सीसी क्यामेराहरुमा मेरो सम्पूर्ण गतिविधिको रेकर्ड भइराखेको हुँदो हो । घरैमा फ्याँक्ने गरी आफ्नो ब्यागमा खकार हालेर घर ता लगँुला तर तल काउन्टरमा ब्याग चेक गर्दा खकार देखियो भने त्यो बेला छोरीको इज्जत कता पुग्ने हो ? उसले कति डन्ड तिर्नुपर्ने हो ! हे भगवान् अब मेरा यस कारणले मेरी छोरीको इज्जत कता पुग्ने हो ? यो देशैको इज्जत जान बेर लाग्दैन । छ कि यहाँ थुक्ने ठाउँ ? सोचिरहें । छोरीका अघि यो सबै सोधौं भने म अझै पाखे हुने त्रास छ एकातिर अर्कातिर मनभित्रको यो अटेसमटेसले मलाई खपिनसक्नु पारेको छ, बडो विवश छु ।
तै कसै गरी कफी पिएँ, बडो डर लागिरह्यो । सुरुप्प होला कि भन्ने सानो डर परेन ! ख्वाक्क खोकी लाग्न के बेर ? तरल वा अन्य पदार्थ निल्दा सर्कियो भने कति खोकिने हो ? कति डन्ड तिर्नुपर्ने हो सोच्तै पिएँ त्यो कफी । अहिले मलाई सोचेजस्तो खालकोे समस्या परेन । नत्र पर्ने थियो फसाद ! कसै गरी कफी पिएँ । मलाई लाग्यो त्यो कफी होइन डर र त्रास पिएकी हुँ । यसै बेला मेरा आँखा हामी बसेको भन्दा अलिक पल्लो टेबुलतिर गए । त्यहाँ एक जोडी थिए । परेवाको माउले बच्चालाई चारो खुवाउँदाझै उनीहरु मुख जोतिरहेका थिए । खोक्न र सुरुप्प गर्न नभए पनि यहाँ मुख जोत्न भने मजासँग पाइँदो रहेछ भन्ने लाग्यो । यो ठाउँमा मनपरिसँग काठमाडौको जसरी कतै थुक्न पाइने होइन क्यारे, त्यसैले शायद यिनीहरुले परस्परमा खकार पो निलानिल गरिरहेका होलान् कि भन्ने पनि लाग्यो । बराहरुले थुक्न पाएनछन् क्यारे, यस्तो पनि सोचिहेरें ।
अब मलाई अहिले नै घर फिरुँ फिरुँ लागेर आयो । यो खकार बोकेर सभ्य बन्नु भन्दा बरु ता बरु हडताल र जुलुसै पो सहन सकिने मेरो अनुमान भयो । मेरा मनभरि मेरो घरको परिदृश्य घुम्न थाल्यो । उही बाँसझाँग, उनै टाँकीका रुखहरु, उनै घर कटेराहरु, उही ढाल्ने घारी, उही अरुण खोलाको सुसाहट ! उही सगरमाथाको मनोहर दृश्य ! इत्यादि कुराहरु सम्झेर मनमा खुल्दुली मच्चिन थाल्यो । घर ता फिर्ने नै हो तर हडताल पो. छ कि अहिले पनि....... देशलाई टुक्राटाक्री पार्ने काम अब ता सके कि त ? मेरो भागमा पनि एउटा टुक्रो प¥यो कि परेन होला ! सोच्तै छोरीका साथ लागेर म गगनचुम्बी भवनको अट्टालिकाबाट ओर्लिन लागें । अनि सोचें– मेरो देश पनि कतै म जस्तै माथि पुगेर तल असपत्तालतिर खसिरहेको ता छैन !
हे भगवान...... तिम्रो रिस ले पनि मेरो ज्यान लाने भो
बरु काली भन कृपया मलाई जाली नभन
हेर मेरी सानी गुडिया
शोकले पोतेको तिम्रो मन
मेरो आँखामा भरदिन बादल
कहिलेकाहीँ भेट हुँदा
मन सानो भयो